खरीद बानी परिवर्तन भएको छ, कम्पनीहरू छैन Martech Zone
कहिलेकाँही हामी कामहरू गर्दछौं किनकी यो यसरी गरिएको छ। कसैलाई किन पनी याद छैन, तर हामी यो गरिरहन्छौं ... यसले हामीलाई चोट पुर्‍याए पनि। जब म आधुनिक कम्पनीहरूको विशिष्ट बिक्री र मार्केटि h हाइरार्की देख्छु, संरचना बदलिएन किनकि हामीसँग बिक्री मानिसहरू थिए फुटपाथ धक्का र डलर को लागी डायल गर्दै.
मैले भ्रमण गरेका धेरै कम्पनीहरूमा पर्खालको बजारमा धेरै “बिक्री” भइरहेको छ। बिक्री मात्र क्रम लिन्छ। दुर्भाग्यवस, संगठनको नियमहरूको कारण, बिक्री विभागहरू ती प्रयासहरूको साथ जम्मा हुन जारी छ। यो खैरो क्षेत्र हो जुन सामाजिक प्रभाव मार्केटिंग मापन मुश्किल बनाउँछ।
मैले केहि बारेमा लेखेको छु कि कसरी बिक्रीले सामाजिक मिडियाको फाइदा लिन सक्दछ साथ साथै खरीददारहरूको व्यवहारमा परिवर्तन केहि धेरै पोष्टहरूमा:
बिक्री पेशेवरहरूको लागि पाँच सामाजिक नेटवर्कि Ste चरणहरू
केहि कम्पनीहरूले मलाई थाहा छ कि मार्केटिंगलाई पूरै बिक्रीमा सारेको छ र अन्यले बिक्री संस्थासँग पूर्ण रूपमा लगिसकेका छन्। म कि त वकालत गरिरहेको छैन, तर यो चाखलाग्दो छ कि त्यहाँ धेरै भ्रम भइरहेको छ जब यो आउँदछ जहाँ तपाईंको बिक्री र मार्केटिंग बजेट लगानी गर्ने हो। त्यहाँ त्यहाँ कुनै प्रक्रिया छैन जुन समुदाय बिक्रीको मापन समर्थन गर्दछ ... जहाँ तपाईंको उत्पादन विपणन वा बिक्रीको सहयोग बिना तर तपाईंको समुदायको साथ बेचिन्थ्यो।
एक संस्था भित्रको परम्परागत प्रक्रिया क्रेडिट को बाहिर क्रेडिट को रूप मा संभावना संभावना बिक्री प्रक्रिया को माध्यम बाट अगाडि बढ्छ।
वास्तविकता, अवश्य पनि यो हो कि बिक्री बिक्री, मार्केटिंग वा तपाईंको समुदायबाट पनि आउन सक्दछ। तपाईंले आफ्नो समुदायबाट एक सिफारिसको आधारमा कति पटक उत्पादन वा सेवा खरीद गर्नुभयो?
यो मेरो लागि अचम्मको कुरा हो कि अधिक कम्पनीहरूले एफिलियट मार्केटिंग सेवाहरूको उपयोग गरेर समुदायको फाइदा लिदैनन्। मसँग सबै उत्पादहरूमा एफिलियट मार्केटिंग खाताहरू छन् र मेरा सबै विक्रेताहरूसँग रेफरल सम्झौताहरू। म ती संगठनहरूको लागि बिक्री पाउँदै छु त्यसैले यो सही छ कि म दुबै क्रेडिट र इनाम पनि प्राप्त गर्छु!
आदर्श रूपमा, एक 'करीव' बिक्री, मार्केटिंग वा समुदायको साथ हुँदैन। खाता खाता उत्पादन प्रक्रियामा नजिकै हुनेछ, आश्वसन दिँदै बिक्री सही स्रोतमा क्रेडिट गरिएको छ। यसले कम्पनीहरूले कहाँ लगानी गर्ने संसाधनहरू पहिचान गर्न अनुमति दिनेछ।
बिक्री, मार्केटिंग, र उत्पादनहरू एक अर्कोको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ संसाधन र परिणामहरूको लागि। सन्देश र ब्रान्डि consistent सुसंगत छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न तिनीहरू पनि एक अर्कासँग धेरै नजिकबाट काम गर्नुपर्नेछ। लागत प्रति बन्द सबै तीन संसाधन मा मापन गरिनु पर्छ। क्रेडिटको केहि स्थानान्तरणहरू हुन सक्दछ, अवश्य पनि… एक सिफारिश वेबसाइटमा जान सक्दछ र अतिरिक्त जानकारीको लागि बिक्री बिक्रीलाई सम्पर्क गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, बिक्री टोली पोषण गर्दछ र बिक्रीलाई बन्द गर्नको लागि ल्याउँछ।
तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईंसँग उत्कृष्ट उत्पादन वा सेवा छ जुन मुखको शब्दले एक्लै बढ्छ ... यस अवस्थामा तपाईं उत्पादन र बिक्रीको तुलनामा बढी लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ। अवश्य पनि, यदि समुदायमा कुनै बन्द बन्द भइरहेको छ भने, उत्पाद व्यवस्थापन टोली जिम्मेवार मान्नुपर्नेछ - त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि तपाईंको उत्पादन बेईमान छ।
पुरानो ह्यान्ड-अफ विधिले अब कार्य गर्दैन। धेरै मार्केटिंग विभागहरूको अविश्वसनीय निकट दरहरू हुन्छन्, तर किनकी बिक्रीले क्रेडिट प्राप्त गर्दछ - तिनीहरूले संसाधनहरू पनि पाउँछन्। मैले धेरै विपणन विभागहरू देखेका छन् कि लगभग कुनै बजेट बिना चमत्कारहरू तान्दछ ... संगठनमा बन्द खन्याई जहाँ बिक्री टोली केवल अर्डर लिइरहेको छ - तर अझै क्रेडिट, स्रोतहरू र बोनसहरू पाउँदैछ। यदि एक वेब सिसाई खाताबाट टाढाको साइटमा सिधा साइटबाट जम्प गर्न सक्दछ भने, मार्केटिंग विभागले मात्र क्रेडिट पाउन सक्दछ।
यदि कम्पनीहरूले बुझ्न सक्दछन् कि प्रत्येक कार्यनीति उनीहरूको समग्र व्यापार रणनीतिमा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भने, उनीहरूले पनि सही मापन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ कि बिक्री कहाँबाट आउँदैछ!
टैग: सामग्री प्रदर्शनफारामफ्रान्सेलीजर्मनउद्योग रोइमारी स्मिथproofreadingअनलाइन बेच्नुहोस्नयाँ सम्बन्ध मार्केटिंग